တူရကီႏိုင္ငံ၊ အစၥတန္ဘူလ္မွာ ကစားသြားတဲ့ လီဗာပူးနဲ႔ခ်ဲလ္ဆီးတုိ႔ရဲ႕ဥေရာပစူပါဖလားပြဲဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ရာသီ လီဗာပူးနဲ႔စပါးတုိ႔ရဲ႕ခ်န္ပီယံလိဂ္ဗုိလ္လုပြဲထက္ေတာင္ အရည္အေသြးအရေရာ အႀကိတ္အနယ္ဆန္မႈအရပါ ပိုေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုရွယ္မီဒီထက္မွာ ပရိသတ္ေတြက ေျပာလာၾကပါတယ္။ တကယ္လည္း သာမန္ပြဲခ်ိန္မိနစ္ ၉၀ မွာ ၁-၁၊ အခ်ိန္ပုိ ၁၂၀ မိနစ္အၿပီးမွာ ၂-၂ ျဖစ္ေနလုိ႔ ပင္နယ္တီအဆုံးအျဖတ္ခံယူရတဲ့အထိ ေရာက္ခဲ့ရတယ္။ ဒီလုိပြဲေကာင္းတစ္ပြဲမွာ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွာ သူရဲေကာင္းျဖစ္ခဲ့ၾကတဲ့ ကစားသမားေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္သူေတြလဲဆုိတာ ဆက္ၾကည့္ရေအာင္….
စပိန္သားဂိုးသမားအက္ဒရီယန္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ရက္ေလာက္က အသင္းလက္မဲ့ျဖစ္ေနခဲ့ေပမယ့္ အခုေတာ့ လီဗာပူးနဲ႔အတူ ဖလားတစ္လုံးကိုင္ေျမွာက္ႏိုင္ခဲ့လို႔ သူ႔ဘ၀ရဲ႕အလွည့္အေျပာင္းက အံ့ၾသဖို႔ေတာင္ေကာငး္ပါတယ္။ ခ်ဲလ္ဆီးနဲ႔ဥေရာပစူပါဖလားပြဲမွာလည္း သူဟာ လီဗာပူးအတြက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ပြဲထြက္ပါလာခဲ့တာပါ(ေနာ္၀စ္ခ်္နဲ႔ပြဲတုန္းက လူစား၀င္)။ အဲဒီပြဲထြက္မွာတင္ လီဗာပူးကို ဖလားတစ္လုံးရေစခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပင္နယ္တီအဆုံးအျဖတ္မွာ ေအဘရာဟမ္ရဲ႕ေနာက္ဆုံးပင္နယ္တီကုိကာကြယ္ၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ သူဟာ လီဗာပူးရဲ႕သူရဲေကာင္းသစ္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
ကန္တီရဲ႕ျပန္လာႏိုင္မႈကေတာ့ တအံ့တၾသျဖစ္စရာပါပဲ။ သူဟာ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ခ်ဲလ္ဆီးရဲ႕ရာသီႀကိဳကာလအခ်ိန္ေတာ္ေတ္ာမ်ားကို လြဲေခာ်္ခဲ့ရပါတယ္။ အုိးလ္ထရက္ဖုိ႔ဒ္မွာကတည္းက ကန္တီကို သိပ္သုံးခဲ့သင့္တာေပါ့။ ခ်ဲလ္ဆီးအတြက္ သူျပန္ကစားတဲ့လီဗာပူးနဲ႔ပြဲမွာေတာ့ ကန္တီဟာ ေဘာလုံးရေနခ်ိန္ျဖစ္ေစ၊ ေဘာလုံးမရခ်ိန္ျဖစ္ေစ ၿပိဳင္ဘက္ကို အၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ဆုံးသူျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ လီဗာပူးရဲ႕ေဘာလုံးလမ္းေၾကာင္းေတြကို ျဖတ္ေတာက္ၿပီး သူတုိ႔ကစားသမားေတြကို ဖိအားေပးႏိုင္ခဲ့ကာ သူေဘာလုံးရခ်ိန္မွာ ခ်ဲလ္ဆီးရဲ႕ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီပြဲရဲ႕ကြင္းထဲက အေကာင္းဆုံးကစားသမားျဖစ္ဖြယ္ရွိပါတယ္။
ဂိုးသမားကီပါအတြက္ကေတာ့ ခ်ဲလ္ဆီးအက်ၤီနဲ႔အေကာင္းဆုံးကစားႏိုင္ခဲ့တဲ့ပြဲေတြထဲက တစ္ပြဲျဖစ္ခဲ့တာပါ။ တစ္ပြဲစလုံးမွာ လက္စြမ္းျပကာကြယ္မႈေတြလုပ္ခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ဆာလာနဲ႔ဗန္ဒစ္ဂ်္တို႔ရဲ႕ႏွစ္ဆင့္ကန္သြင္းမႈကို သူကာကြယ္သြားပုံကေတာ့ လက္ဖ်ားခါေလာက္ပါတယ္။ ပင္နယ္တီအဆုံးအျဖတ္မွာ တစ္လုံးမွမကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့တာတစ္ခုပဲ ေျပာစရာရွိတာပါ။
မာနီရဲ႕သြင္းဂိုးေတြေၾကာင့္သာ လီဗာပူးဟာ ဥေရာပစူပါဖလားမွာ ပင္နယ္တီအဆုံးအျဖတ္ကန္ခြင့္ရခဲ့တာပါ။ မိနစ္ ၁၂၀ အတြင္း လီဗာပူးရခဲ့တဲ့ ၂ ဂိုးစလုံးကိုသူသြင္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဲဒါေၾကာင့္လည္း ဥေရာပစူပါဖလားပြဲစဥ္တစ္ပြဲမွာ ၂ ဂိုးသြင္းႏိုင္ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအာဖရိကသားျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယပိုင္းအစမွာ သူသြင္းတဲ့ပထမဂိုးဟာ သာမန္ပြဲခ်ိန္မိနစ္ ၉၀ အတြင္း လီဗာပူးသေရရဖို႔ အဆုံးအျဖတ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အခ်ိန္ပိုမွာ လီဗာပူးဦးေဆာင္ႏိုင္ေစမယ့္ဒုတိယဂိုးကို လွပစြာနဲ႔သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။
တူရကီနိုင်ငံ၊ အစ္စတန်ဘူလ်မှာ ကစားသွားတဲ့ လီဗာပူးနဲ့ချဲလ်ဆီးတို့ရဲ့ဥရောပစူပါဖလားပွဲဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ လီဗာပူးနဲ့စပါးတို့ရဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲထက်တောင် အရည်အသွေးအရရော အကြိတ်အနယ်ဆန်မှုအရပါ ပိုကောင်းတယ်လို့ ဆိုရှယ်မီဒီထက်မှာ ပရိသတ်တွေက ပြောလာကြပါတယ်။ တကယ်လည်း သာမန်ပွဲချိန်မိနစ် ၉၀ မှာ ၁-၁၊ အချိန်ပို ၁၂၀ မိနစ်အပြီးမှာ ၂-၂ ဖြစ်နေလို့ ပင်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်ခံယူရတဲ့အထိ ရောက်ခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုပွဲကောင်းတစ်ပွဲမှာ နှစ်ဖက်စလုံးမှာ သူရဲကောင်းဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ ကစားသမားတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ ဆက်ကြည့်ရအောင်….
စပိန်သားဂိုးသမားအက်ဒရီယန်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ ရက်လောက်က အသင်းလက်မဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ လီဗာပူးနဲ့အတူ ဖလားတစ်လုံးကိုင်မြှောက်နိုင်ခဲ့လို့ သူ့ဘဝရဲ့အလှည့်အပြောင်းက အံ့သြဖို့တောင်ကောင်းပါတယ်။ ချဲလ်ဆီးနဲ့ဥရောပစူပါဖလားပွဲမှာလည်း သူဟာ လီဗာပူးအတွက် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပွဲထွက်ပါလာခဲ့တာပါ(နော်ဝစ်ချ်နဲ့ပွဲတုန်းက လူစားဝင်)။ အဲဒီပွဲထွက်မှာတင် လီဗာပူးကို ဖလားတစ်လုံးရစေခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပင်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်မှာ အေဘရာဟမ်ရဲ့နောက်ဆုံးပင်နယ်တီကိုကာကွယ်ပြီးချိန်မှာတော့ သူဟာ လီဗာပူးရဲ့သူရဲကောင်းသစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ကန်တီရဲ့ပြန်လာနိုင်မှုကတော့ တအံ့တသြဖြစ်စရာပါပဲ။ သူဟာ ဒဏ်ရာကြောင့် ချဲလ်ဆီးရဲ့ရာသီကြိုကာလအချိန်တော်တေ်ာများကို လွဲခောျ်ခဲ့ရပါတယ်။ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာကတည်းက ကန်တီကို သိပ်သုံးခဲ့သင့်တာပေါ့။ ချဲလ်ဆီးအတွက် သူပြန်ကစားတဲ့လီဗာပူးနဲ့ပွဲမှာတော့ ကန်တီဟာ ဘောလုံးရနေချိန်ဖြစ်စေ၊ ဘောလုံးမရချိန်ဖြစ်စေ ပြိုင်ဘက်ကို အခြိမ်းခြောက်နိုင်ဆုံးသူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ လီဗာပူးရဲ့ဘောလုံးလမ်းကြောင်းတွေကို ဖြတ်တောက်ပြီး သူတို့ကစားသမားတွေကို ဖိအားပေးနိုင်ခဲ့ကာ သူဘောလုံးရချိန်မှာ ချဲလ်ဆီးရဲ့မောင်းနှင်အားဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီပွဲရဲ့ကွင်းထဲက အကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
ဂိုးသမားကီပါအတွက်ကတော့ ချဲလ်ဆီးအင်္ကျီနဲ့အကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေထဲက တစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာပါ။ တစ်ပွဲစလုံးမှာ လက်စွမ်းပြကာကွယ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် ဆာလာနဲ့ဗန်ဒစ်ဂျ်တို့ရဲ့နှစ်ဆင့်ကန်သွင်းမှုကို သူကာကွယ်သွားပုံကတော့ လက်ဖျားခါလောက်ပါတယ်။ ပင်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်မှာ တစ်လုံးမှမကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာတစ်ခုပဲ ပြောစရာရှိတာပါ။
မာနီရဲ့သွင်းဂိုးတွေကြောင့်သာ လီဗာပူးဟာ ဥရောပစူပါဖလားမှာ ပင်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်ကန်ခွင့်ရခဲ့တာပါ။ မိနစ် ၁၂၀ အတွင်း လီဗာပူးရခဲ့တဲ့ ၂ ဂိုးစလုံးကိုသူသွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒါကြောင့်လည်း ဥရောပစူပါဖလားပွဲစဉ်တစ်ပွဲမှာ ၂ ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအာဖရိကသားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယပိုင်းအစမှာ သူသွင်းတဲ့ပထမဂိုးဟာ သာမန်ပွဲချိန်မိနစ် ၉၀ အတွင်း လီဗာပူးသရေရဖို့ အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ အချိန်ပိုမှာ လီဗာပူးဦးဆောင်နိုင်စေမယ့်ဒုတိယဂိုးကို လှပစွာနဲ့သွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။